Minecraft မီးရှူးတိုင်တည်ဆောက်ပါ- ဤအရာများသည် | လိုက်နာရန် အဆင့်များဖြစ်သည်။ Androidsis
Nerea Pereira | 25/04/2022 11:45 | Android ဂိမ်းများ
minecraft တွင် ရှင်သန်မှုအတွက် အခြေခံအချက်အချို့ရှိပါသည်။တယောက်က မီးရှူးမီးပန်း။ ဂူတစ်လုံးလို မှောင်နေတဲ့ အာကာသကို အလင်းပေးနိုင်ဖို့ ဒီဒြပ်စင်တွေ အမြဲရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါက အသက်ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကြားက ခြားနားချက်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ညမိုးချုပ်ပြီး အရာရာကို မှောင်မိုက်နေချိန်မှာတောင် အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ပင်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက Minecraft ကို စတင်ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သင်တတ်နိုင်သမျှ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ minecraft တွင် မီးရှူးမီးပန်းများMojang ၏ဂိမ်း။ ၎င်းတို့ကို ဖန်တီးပုံ၊ အသုံးပြုနည်းနှင့် ဤဂိမ်းတွင် ၎င်းတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
1 Minecraft မီးရှူးမီးတိုင်များ ကဘာလဲ၊ အဲဒါတွေက ဘာအတွက်လဲ။
1.1 မီးရှူးတိုင်များ၏ အရေးအကြီးဆုံးလက္ခဏာများ
2 Minecraft တွင် မီးရှူးတိုင်များ ပြုလုပ်နည်း
2.1 မီးရှူးတိုင် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
Minecraft မီးရှူးမီးတိုင်များ ကဘာလဲ၊ အဲဒါတွေက ဘာအတွက်လဲ။
Minecraft သည် ကျန်ဂိမ်းများနှင့် အလွန်ကွဲပြားသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းအားလုံးသည် တုံးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။. မီးရှူးတိုင်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထွန်းလင်းစေရန် အခြားလုပ်ကွက်များ၏ထိပ်တွင် ထားရှိထားသည့် ဘလောက်အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း ရည်ညွှန်းထားသော်လည်း မီးတိုင်များသည်လည်း များပါသည်။ မီးရှူးတိုင်များသည် ဂိမ်းအတွင်းမှ အလင်းထုတ်လွှတ်သည့် အရာအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိစ္စတွင်ပင် ၎င်းကို ထားရှိပုံပေါ်မူတည်၍ အလင်း၏ပြင်းထန်မှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည် (အောက်ခြေမှလွဲ၍ မည်သည့်ဘလောက်၏မျက်နှာတွင်မဆို ထားရှိနိုင်ပါသည်။) .
၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ သင်ကသစ်သားချောင်းနှင့်မီးသွေးလိုအပ်သည်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ workbench ရဲ့ အလယ်မှာ နဲ့ အောက်ခြေက stick ကို ထားရပါမယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ တုတ်များပြုလုပ်ရန် သစ်သားတုံးနှစ်တုံးရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်ခုံ၏အလယ်တွင် တစ်ခုနှင့် အောက်တစ်ခုအား ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ထိုင်ခုံများကို သစ်သားတုံးလေးတုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဂိမ်း၏ဇာတ်ကောင်စာရွက်မှ တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သတိရပါ။
Minecraft မီးရှူးတိုင်များအကြောင်း သိထားရမည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ၊ သူတို့ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အလင်းရောင်က ယာယီပဲ၊ ဒါကြောင့် သူတို့ အမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အပြင်ထွက်ပြီး ပြန်ဖွင့်ချင်တဲ့အခါ မီးကျောက်နဲ့ မီးပူတိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Minecraft တွင် အမြဲတမ်းအလင်းရောင်ရရှိရန် တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ မီးအိမ်များဖြစ်ပြီး မီးရှူးတိုင်များ၏အလင်းရောင်သည် အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မီးရှူးတိုင်များသည် အခြားအရာဝတ္ထုများကို သင်ထားနိုင်သော ပြီးပြည့်စုံသော အကွက်တစ်ခုနှင့်တူသည်။ (ဥပမာ မီးတိုင်များ) ပတ်လည်။ ဤအရာများသည် ခိုင်မာသောအုတ်များဖြစ်သောကြောင့် အောက်ခြေနေရာ၌ အခြားမီးရှူးတိုင်တစ်ခုချထားပါက သဲတုံးပြိုကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရပါမည်။
မီးရှူးတိုင်များ အလင်းရောင်အဆင့် 14 ရှိသည်။ထို့ကြောင့် ရေခဲများနှင့် နှင်းအလွှာများပင် အရည်ပျော်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အလင်းရောင်အဆင့် 10 ရှိသည့် စိတ်ဝိညာဉ်မီးရှူးတိုင်များပါရှိပြီး ပထမအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲ Minecraft ရှိ ဤမီးရှူးတိုင်များသည် ရေခဲ သို့မဟုတ် နှင်းများကို အရည်ပျော်၍မရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း အောက်ခြေမှလွဲ၍ မည်သည့်ဘက်ခြမ်းတွင် ထားရှိခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အလင်းရောင်အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သေးသည်။ ဤအရာများထဲမှ မီးရှူးတိုင်များကို ထိပ်တွင်သာထားနိုင်သော်လည်း၊
End Portal ဘောင်များကို ပြုပြင်ထားသည်။
Rods of the End
အမိုးအကာများနှင့် အိမ်များအတွင်း မီးရှူးမီးများကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း၊ ညဘက်တွင် ပေါ်လာသည့် ရန်လိုသော လူအုပ်များအပြင် ဖုတ်ကောင်များနှင့် တွားသွားသတ္တဝါများကို ရှောင်ရှားရန် အလင်းရင်းမြစ်များကို ထားရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။. သဲ၊ သဲနီ၊ ဘိလပ်မြေ သို့မဟုတ် ကျောက်စရစ်များ ပြုတ်ကျပါက မီးတိုင်သည် ကွဲသွားနိုင်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်။
Minecraft တွင် မီးရှူးတိုင်များ ပြုလုပ်နည်း
မသန်စွမ်း minecraft မီးတိုင်များ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း သင်ကစားပြီးသည်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဆင့်များစွာကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာသို့မရောက်မီတွင် ရိုးရှင်းပါသည်။ စတင်ပြီးသည်နှင့် သင့်တွင် ကိရိယာများ ရှိမည်မဟုတ်သောကြောင့် ပထမဆုံး သစ်ပင်များကို လက်ဖြင့် စုဆောင်းရပါမည်။
လုံလောက်တဲ့ စည်အရေအတွက်ကို ရပြီဆိုရင် စာရင်းကိုဖွင့်ပြီး အတွင်းထဲမှာ ထည့်ထားရပါမယ်။ သစ်လုံးတစ်ခုစီသည် သင့်အား သစ်သားပျဉ်လေးခု ပေးပါမည်။
ထို့နောက်သင်ရမည် လက်မှုစားပွဲတစ်ခုဖန်တီးပါ၊ ၎င်းအတွက် သင်သည် စာရင်းနေရာအားလုံးတွင် ဖြန့်ဝေထားသော သစ်သားပျဉ်လေးခုကို ထားရှိရပါမည် (၎င်းအတွက် နေရာတစ်ခုလျှင် ပျဉ်တစ်ချပ်ကို ဆိုလိုသည်။
လက်မှုစားပွဲကို ဖန်တီးပြီးရင်၊ သစ်သားပေါက်ချွန်းကို လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤအလုပ်အတွက် သင်သည် တုတ်လေးချောင်းပြုလုပ်ရန် အလယ်ဗဟိုတွင် သစ်သားပျဉ်နှစ်ပြားကို အလှဆင်ရန် စားပွဲသို့သွားရပါမည်။
တုတ်တွေလုပ်ထားပြီးသားဆိုရင် နောက်တစ်ခုက နှုတ်သီးလုပ်ရမယ်။ လက်မှုစားပွဲပေါ်တွင် တုတ်နှစ်ချောင်း၊ အလယ်စတုရန်းတွင် တစ်ခု၊ အောက်ပိုင်း၌ တစ်ခုနှင့် ပျဉ်သုံးခုကို ထားရမည်။
သစ်သားပေါက်ချွန်းဖြင့် စတင်တည်ဆောက်သင့်သည်။ ကျောက်များကိုစုဆောင်းပါ။. ဤပထမပစ္စည်းကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသော်လည်း ကျောက်မိုင်းကဲ့သို့သော အချို့နေရာများတွင် ကျောက်မီးသွေးကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ သစ်သားမြှောင့်များသည် ကြာမြင့်ချိန် အလွန်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျောက်ချွန်းများသည် ကြာရှည်မခံသော်လည်း သစ်သားထက် အနည်းငယ်ပိုကြာသည်။ ကျောက်ချွန်းပြုလုပ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်သည် သစ်သားနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် ပစ္စည်းကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ကျောက်တုံးကို ဆက်လက်ရရှိရန် အချိန်အနည်းငယ်ကြာမည်ဖြစ်ပြီး ဤနည်းဖြင့် သင်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးကို စုဆောင်းပါ။. ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့် နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေးရရှိပြီးပါက လက်မှုလုပ်ငန်းစားပွဲသို့ ပြန်၍ မီးရှူးတိုင်များ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စတင်လုပ်ဆောင်ရန် အလယ်စတုရန်းတွင် ကျောက်မီးသွေးတစ်ချောင်းနှင့် အောက်ခြေ၌ တုတ်တစ်ချောင်းကို ထားရန်လိုသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည် အနည်းငယ်ပင်ပန်းသော်လည်း ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် တခြားနည်းလမ်းကို သိထားရင် ဒါဟာ ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုပါ။
မီးရှူးတိုင် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
အမှန်တရားက ဟုတ်တယ်။ minecraft တွင် စိတ်ဝိညာဉ်မီးရှူးတိုင် အမျိုးအစား အထူးရှိ သည်။. ၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းသည် သာမန်မီးရှူးတိုင်များနှင့် အလွန်ဆင်တူသည်၊ ကွာခြားချက်မှာ လက်မှုစားပွဲ၏ဗဟိုသေတ္တာသုံးလုံးကိုအသုံးပြုပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် မြေကြီး သို့မဟုတ် စိတ်ဝိညာဉ်သဲကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သာမာန်မီးရှူးတိုင်များကဲ့သို့တူညီသော်လည်း မီးသွေးအစား redstone ဖုန်မှုန့်ကိုအသုံးပြုပါက redstone မီးရှူးတိုင်များကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
သင့်မှာလည်း ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ မီးရှူးတိုင်များ ပြုလုပ်ပြီးပါက မီးရှူးတိုင်များကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းများ အလှဆင်နိုင်သည်။. မီးပုံးပြုလုပ်ရန် ဦးစွာ မီးရှူးတိုင်ဖန်တီးရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို အလယ်အထိုင်ရှိ လက်မှုစားပွဲပေါ်တွင် ထားကာ သံတုံးများဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ရေအောက်မီးရှူးတိုင်ကို ဖန်တီးနိုင်သလို လက်မှုပညာအရ မီးရှူးတိုင်တွေရဲ့ အရောင်ကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
မီးရှူးတိုင်များ ဖန်တီးပြီးသည်နှင့် လုပ်နိုင်သည့်အရာမှာ မီးရှူးတိုင်များကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မီးပုံး (အမြဲတမ်းအလင်းရင်းမြစ်) ကိုဖန်တီးရန် မီးရှူးတိုင်ကို ဖန်တီးရန်၊ ၎င်းကို အလယ်အထိုင်ရှိ စားပွဲပေါ်တွင် ထားကာ သံတုံးများဖြင့် ဝန်းရံထားရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ရေအောက်မီးရှူးတိုင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး အထူးအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ မီးရှူးတိုင်၏အရောင်ကိုပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Minecraft တွင် မီးရှူးတိုင်ပြုလုပ်နည်း- ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရွေးချယ်မှုများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြသည်။
Moto G 5G (2022) နှင့် Moto G Stylus 5G (2022)၊ Motorola ၏ အလယ်အလတ်တန်းစားကို သက်တမ်းတိုးထားသည်။